Zvinhu zvakakosha zvekufunga usati wagadzira app - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Sekugadzira, iwe ungangodaro wanga uchirota nezvekuvandudza yakabudirira app. Pane zvakawanda zvekufunga nezvazvo kana zvasvika kune kuvandudza kweApp. Iyo app yaunogadzira, inogona kana inogona kuwana mhinduro yakanaka kubva kune vashandisi. Zvino, chii iwe chaungaite kuti uve nechokwadi chekuti yako app iri inobudirira uye inowana mhinduro yakanaka kubva kune vashandisi?
Iwe unogona kunge uine zano rakakura reapp, asi zano rakakura haringatori mhinduro dzakanaka kubva kuvashandisi. Pfungwa yako yeapp inofanirwa kuve yakasarudzika zvakakwana kuti ibude kubva muboka revanhu, kunyanya kana akawanda maapplication ari kutonga pamusika.
Kunyangwe kana iwe ukazogadzira app iyo isati yambogadzirwa kare, hapachina vimbiso yekuti mushandisi anozotora iko kunyorera, asi haufanire kunetseka, kune mashoma mazano iwe aunogona kushandisa, ayo anozoona kuti yako app inobudirira.
Ngatitarisei zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvaunofanira kufunga usati wagadzira app.
1. Chirevo Chinoratidza
Usati watanga kugadzira yako app, iwe unofanirwa kufunga humbowo pfungwa yako. Usati waisa pfungwa yako muchiito, zvibvunze kana yako app ichave mhinduro kudambudziko riripo.
Kana pfungwa yako yatove kuitwa uye kuvandudzwa kuita app, hazvizove nebasa rekugadzira chirongwa chemhando yakafanana.
Zvakawanda zvitsva Developers vanowanzo gadzira chikanganiso ichi uye vanoshanda siku nesikati paapp yavo chete kuti vazive kuti zano ravo ravaida rakatoitwa kare.
Ziva vateereri vako
Kuti ugadzire inobudirira nharembozha, zvakakosha kuti iwe uzive vateereri vako. Kunyangwe iwe uine zano rekuchinja, hazvireve kuti chichava kubudirira. Kazhinji yenguva, Developers ita chikanganiso chekutarisa zvakanyanya pane chakatarwa basa pane pane chaicho vateereri.
Asi kuziva vateereri vako kwakanyanya kukosha. Ziva iro boka revanhu, vanozokwezva kune yako pfungwa uye tarisa kushambadza iyo app pakati peako tarisiro vateereri.
Ita tsvagiridzo yako musati maenda nenzira yekusimudzira Paunenge iwe uchinge waziva nezve chako chakanangwa nevateereri, iwe unogona nenzira kwayo kuronga magadzirirwo uye mashandiro.
Dhizaini yeapp inoitawo basa rakakosha mukubudirira kwayo. Zvakawanda mushandisi-ushamwari interface yako ndeye, ivo vanowedzera vashandisi vachazoda kuitora.
Paunenge uchigadzira yako app, ramba uchifunga kuti zvemukati zvako zvinofanirwa kuve zvako zvekutanga hanya. Bvisa chero zvisina basa zvinhu, zvisina basa. Izvo zvakanyanya kuderedzwa zvinovhiringidza zviripo, zvakanyanya kutarisa kunoiswa pane zvako zvemukati.
Zvakare, edza kushandisa imwechete yekuisa munda. Iyo inowedzera minda yekuisa iwe yaunosanganisa, ivo vanowedzera vashandisi vanozovhiringidzika uye zvinotungamira kune yakashata mushandisi ruzivo.
chibatiso zvakakosha zvakanyanya kana zvasvika pakugadzira nharembozha. Vanhu vanowanzochengeta yakawanda yeruzivo rwavo rwakakosha pafoni yavo. Kubva kunzvimbo kuenda kune mapassword uye account account account, ma smartphones anobata ruzivo rwakawanda rwemunhu.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, data protection ndeyekuitira hanya zvakanyanya kune chero mushandisi. Kana iwe ukawana yako chibatiso maprotocols zvisizvo, ipapo chimwe chinhu chinozokanganisika uye iwe uchaona chiroto chako cheakabudirira application kubondera ipapo.
Saka usati wagadzira app, ita shuwa kugadzira iyo chibatiso Yechikumbiro chinhu chinonyanya kukosha.
Yemazuva ano smartphone vashandisi vanovimba zvakanyanya pachikumbiro chemafoni kuti vaite basa ravo. Kana yako app ikapenya, mikana ndeyekuti vashandisi vanozobvisa iyo application.
Kuva nekukurumidza Database yakakosha kana iwe uchivavarira kupa vashandisi vako kuita kwakanyanya.
Pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kufunga nezvazvo usati wasarudza a Database. Izvi zvinosanganisira chimiro chedata, kumhanya, uye scalability, saizi yedata rinofanira kuchengetwa, kuwanikwa kwedata uye chengetedzo uye chibatiso yedata.
6. Kubvuma kubhadhara
Kana iwe urikugadzira e-commerce app, zvakakosha kuti iwe ugopa vatengi iwo epamhepo yekubhadharisa gedhi kuburikidza ravanogona kubhadhara kubhadhara kwavo app. Kuve neapps yakasanganiswa yekubhadhara system ichavimbisa kuti vatengi vanogona kubhadhara zviri nyore, vabhadharira mabhiri avo kana matikiti emabhuku panguva iyoyo.
Kubhadhara magedhi anoenda pamwe chete nekutengesa kunogadzirwa neako bhizimisi. Kune akawanda mabhangi uye masangano emari anopa vatengesi masevhisi senge online yekubhadhara gedhi kune e-commerce varidzi. BBVA Kompasi Online Kubhanga inopa dzakasiyana siyana mhinduro dzemari kusanganisira mutengesi masevhisi. Unogona kushanyira webhusaiti yavo kuti uzive zvimwe.
7. Kufungidzira kweramangwana
Ipo uchipa ruzivo rwakakura rwevashandisi chinhu chakakosha kana zvasvika mukugadzira chirongwa, iwe unofanirwa zvakare kupa kukosha kwakakosha kune ramangwana chiratidzo chako app. Chikumbiro chinofanirwa kuve chakadai kuti chinounza purofiti iwe kunyangwe mune ramangwana.
Kunze kwekupa izvo zvinotarisirwa nevateereri vako, iwe unofanirwa zvakare kutora nhamburiko dzakakomba mukuchengetedza ramangwana rekuvandudza kwechikumbiro chako.
8. Mapuratifomu akatsigirwa
Mumazuva ano, kune maviri anotonga Mapuratifomu inotsigira musika, Android uye iOS, saka unogona kugadzira app inomhanya pane imwe yeiyi Mapuratifomu, asi kuti uve nechokwadi chekuti app yako yasvika pachinhanho chekubudirira, zvakakosha kuti app yako ishande pane ese ari maviri Operating Systems panguva imwe chete.
Nekufambira mberi kwe tekinoroji, zvinokwanisika kugadzira app inoshanda pane ese ari maviri Mapuratifomu. Iyo muchinjika-chikuva chimiro inoita kuti iwe utange iyo app mune zvese Android uye iOS.
9. Kudzidza kunyora?
Zvino kana zvasvika pa kuvandudza kweApp, huwandu hwakawanda hwevanhu hausi macoder pachawo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, pane nzira shoma dzaunogona kutora. Unogona kuenda nenzira yakatwasuka uye kudzidza makodhi. Kuti uite kudaro, iwe unogona kutora chero kosi pane yekufambisa nhare, asi ramba uchifunga kuti kukodha senge chero imwe nyaya kunotora yakakosha nguva yekugona.
Iwe unogona zvirokwazvo kudzidza kudzidza kukodha iwe pachako, asi zvinotora nguva yakawanda. Kuti uwane basa racho, unogona hire nyanzvi kuti iwe unogona kuvimba uye ivo vachaita basa rako nekukurumidza uye zvirinani.
Vanoda rubatsiro neako Mobile Apps? Taura nekutaurirana
5 Zvinokosha zveMafoni Webhu Dhizaini
Aug 9 | patani, mobile app development